Xafladdii qalinjabinta dufacadii 23aad ee kulliyadda Maamulka & Maareynta Jaamacadda – East Africa University
Waxaa ugu horreyn lagu bilaabay munaasabadda aayado quraan ah oo uu soo jeedinayey ardayga Axmed maxamed Ismaaciil, intaas kaddib xafladdii ayaa laguda galay oo kalmaddii ardayda lagu bilaabay.
(Cabdifataax Maxamed Axmed) oo kamid ah ardayda qalinjabisay ayaa ku hadlay kalmadda ardayda, isagoo salaan iyo mahadnaq usoo jeediyey dhamaan kasoo qeybgalayaashii xafladda, isla markaana hambalyo iyo tahniyad usoo jeediyey ardayda qalinjabisay, wuxuu intaas ku daray in la iska kaashado shaqaalaysiinta ardayda qalinjabisay, laguna taageero in ay aqoontooda uga faa’iideeyaan bulshada.
(Fardowso Cabdirashiid Xuseen) ayaa sidoo kale kalmadda ardayda ku hadashay, ayadoo soo gudbisay warbixinta ardayda qalinjabisay, waxay sidoo kale xustay in waxbarashada gabdhaha ay tahay mid horumar laga gaaray, ayna ka muuqdaan goobaha waxbarashada si guud ahaan, iyo jaamacadaha si gaar ah-ba, waxay (Fardowso) ku boorisay gabdhaha in ay ku dadaalaan waxbarashada.
(Haashim Cabdulaahi Cismaan) oo kamid ah barayaasha kulliyadda maamulka iyo maareynta jaamacadda ayaa kalmadiisa uga mahadceliyey ardayda guusha ay ka gaareen noloshooda aqooneed, uguna baaqay in ay ka qeyb qaataan horumarka dalka dhinac walba.
(Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin) ayaa dhankiisa hambalyo usoo jeediyey ardayda qalinjabisay, uguna dardaarmay ka shaqeynta wanaaga iyo khayrka, iyo ka fogaanshaha xumaanta oo ay ugu horreyso tahriibka iyo waxa la mid-ka ah.
(Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan-Jecel) Af hayeenka Madaxtooyada Puntland ayaa sidoo kale hambalyo usoo jeediyey ardayda qalinjabisay, isagoo u sheegay in ay tusaale u noqdaan jiilka dhalinyarada, oo ay ku dadaalaan ka wacyi galinta dhalinyarada tahriibta iyo wixii la midka ah.
(Cabdinaasir Siciid Muuse) Hormuudka Kulliyadda Maamulka & Maareynta Jaamacadda ayaa ka hadlay horumarka ay kulliyaddu gaartay, maamul ahaan iyo arday ahaan-ba, wuxuu si gaar ah u xusay in ay maamul ahaan ku taageerayaan ardayda wax walba oo ay qaban karaan, dhanka kalena looga baahan yahay shirkadaha iyo dowladda-ba in ay ka qeyb qaataan shaqaalaysiinta ardayda.
(Maxamed Maxamuud Ciise) Guddoomiye ku xigeenka Jaamacadda ayaa ka hadlay in ay qalinjabinta ay qalinjabiyeen ardayda dufcadda 23aad ee kulliyadda maamulka iyo maareynta ay tahay guul ay wada gaareen dhamaan ardayda iyo maamulka jaamacadda, wuxuuna usoo jeediyey ardayda in ay hal-abuur sameeyaan, fikradaha ay hayaan-na ay u baddalaan wax muuqda.
Waxaa kale oo munaasabadda qalinjabinta ka hadlay shirkado, hay’ado, iyo aqoonyahan kala duwan, iyagoo ardayda ugu hambalyeeyey qalinjabinta iyo guusha ay gaareen.
Intaas kaddib waxay ardaydu bixiyeen abaalmarino iyo shahaadooyin ay ugu talo galeen maamulka iyo macallimiintooda, iyadoo ay xafladdu kusoo dhamaatay farxad ay dareemayeen dhamaan joogayaashii xafladda.
Ugu dambeyntii waxaa soo xiray xafladda guddoomiye ku xigeenka Gobolka Bari (Axmed Cabdulaahi Cali Cirro), wuxuuna ardayda usoo jeediyey in ay hormuud unoqdaan dhalinyarada, ayna u horseedaan waxqabad, waxbarasho, Iyo wax soo saar.
Maalin Isniin ah (09-05-2016)